Hanor Textile elise Ningbo China, ikakhulukazi ukhiqiza ukuthekelisa ezihlukahlukene ingane Amatjhila ekhaya nendwangu. Yendwangu yethu umkhiqizo imigqa zihlanganisa ingane ingubo, umntwana ibhibhi, umntwana swaddle, umntwana washcloth, umntwana ithawula hooded, umntwana ebhodla indwangu, umntwana inabukeni, umntwana ijazana lasebusuku nengane izingubo. Siphinde ngokukhethekile uboya ingubo, okugeza ithawula, lolwandle ithawula, omdala ijazana lasebusuku, isiguqo, ikhava umcamelo futhi embhedeni amashidi.
Sesakhe ubudlelwano ibhizinisi obuhle namakhasimende kokubili ekhaya aphesheya. Nge ukuthekelisa nakho kwethu ezicebile, imikhiqizo high quality, ngamanani yokuncintisana, inkonzo esiphakeme futhi ku-time kwezidingo, kuba omuhle ukuthi singahlangabezana nezimfuneko yakho futhi idlule amathemba akho.
Sihlala ngabomvu ekwandiseni amakhasimende ethu. Uma unesithakazelo kunoma yiliphi uchungechunge zethu, sicela uxhumane nathi ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa. ukwaneliseka yakho inhloso yemizamo yethu, kokwenza uphenyo kanye nombuzo kuyoba ukunakwa ngelomusa impendulo ngokushesha nge ukusebenza eliphezulu, ngobuqotho.
Igumbi 1215, Haiguang Isakhiwo, Cha 298, Zhongshan West Road, Ningbo, China.
Copyright 2018 Ningbo Yinzhou Hanor Textile Company Limited. Wonke Amalungelo Agodliwe.